गल्ती के हो? | बेजिया
मारिया जोस रोल्डन | 16/07/2021 22:51 | मद्रेस
यो धेरै महिलाको बच्चाको जन्म पछि hours 48 घण्टाको लागि सामान्य छ, गर्भाशयमा कडा संकुचन हुन्छ। यी संकुचनलाई गलत भनिन्छ र धेरै गम्भिर साथ साथै दर्दनाक पनि हुन्छ।
माथि उल्लिखित गल्तीहरू सामान्य सामान्य हुन्छन् र यो तथ्यले गर्दा हुन्छ कि गर्भाशय यसको प्राकृतिक आकारमा फर्किनु पर्छ। अर्को लेखमा हामी तपाइँसँग गल्तीहरू र बारे विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौं बच्चाको बच्चालाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभको लागि उनीहरूसँग जो महत्व छ।
1 गलत र स्तनपानको बीचको सम्बन्ध
2 गलत कार्यको दुखाई
3 गलत किन आवश्यक छ
गलत र स्तनपानको बीचको सम्बन्ध
यी गर्भाशय संकुचन र स्तनपानको बीचमा सिधा सम्बन्ध छ। जहिले पनि बच्चाले स्तन लिन्छ, महिलाको शरीरले हार्मोन अक्सीटोसिन निकाल्छ, जसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। यसैले स्तनपान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जब यो गर्भाशय र रक्तवाहिनहरुमा पाइने रक्तवाहिनहरुलाई बन्द गर्न को लागी आउँछ सम्भव आन्तरिक रक्तस्रावबाट बच्नुहोस्।
गलत कार्यको दुखाई
गर्भपात गर्भावस्थाको रूपमा धेरै पीडादायी र तीव्र गर्भाशय संकुचन हो जुन प्राय: जन्मेपछि after 48 घण्टा सम्म रहन्छ। घटनामा कि दुखाइ पर्याप्त बलियो छ, महिलाले आइपुप्रोफेन लिन सक्छिन् त्यस्तो पीडा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन। यी गलतहरू दोस्रो बच्चाबाट बढी सम्भावनाको साथ देखा पर्दछ। थोरै नयाँ आमाहरू यस्तो प्रसवोन्मुख संकुचन हुन सक्छ।
जति धेरै बच्चाहरू, सम्भवतः माथि उल्लिखित गल्तीहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। पीडा पनि ठूलो हदसम्म निर्भर गर्दछ यदि महिलाको लागि यो आफ्नो पहिलो बच्चा हो वा यसको विपरितमा उसले पहिले नै धेरै बच्चाको बच्चा जन्माइसकेको छ भने। घटनामा जब महिलाको लागि यो उनको पहिलो बच्चाको जन्म हो, गडबडी बाट पीडा धेरै हल्का छ, मासिक धर्म को सम्झना दिलाउने।
जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई वा ठूलो तौलको बच्चालाई जन्माउने सन्दर्भमा, गलतको पीडा धेरै कडा साथै तीव्र हुन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा दुखाइ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले ईन्ट्रायूटरिन पीडालाई कम गर्न सहयोगको लागि केही प्रकारको औषधि लिनु पर्छ।
गलत किन आवश्यक छ
अन्त्यमा, यो संकेत गर्नुपर्दछ कि गल्तीहरू प्राकृतिक रूपमा पनि आवश्यक छन्, अन्यथा, भर्खरै छुटकारा पाएको महिलाले आन्तरिक रक्तस्राव भोग्नु पर्दछ जसले उनको जीवनलाई गम्भीर रूपमा जोखिममा पार्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि जन्म पछि, गर्भाशय बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा फर्कन्छ र यसको प्राकृतिक आकार फिर्ता लिन्छ। यी संकुचनहरूले यसलाई हुन मद्दत गर्दछ र त्यहाँ कुनै आन्तरिक रक्तस्राव हुँदैन।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, एउटी आइमाई जसले भर्खरै आफ्नो बच्चालाई जन्म दिइन्, तपाईले कुनै पनि समयमा चिन्ता लिनुहुन्न कडा संकुचन वा आफ्नो गर्भाशय भित्र गलत छ को बारे मा। यी संकुचनहरू आवश्यक छन् ताकि गर्भाशयले आफुलाई बाँकीको समस्याहरूको बिना नै छुट्याउन सक्दछ जुन वितरणको कारण भएको हुन सक्छ।
याद गर्नुहोस् कि प्रकृतिले यसको पाठ्यक्रम लिनुपर्दछ र यो आवश्यक छ गर्भाशय विस्थापन र गर्भावस्थाको कारण बढाएको, यसको प्राकृतिक आकारमा फर्कनुहोस् र आफैंमा स्थिति राख्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » गल्ती के हो?
यी टिकाऊ फेशन फर्महरूको सहयोगी कपडाहरू हुन्